टोल-टोलमा पुगेर कोरोना परीक्षण हुनुपर्छ- डा. राजभण्डारी | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
‘संक्रमण भए नभएको टेष्ट गर्ने किटको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ टेकुस्थित शुक्रराज अस्पतालका डा. सागरकुमार राजभण्डारीले एनआरएन रेडियोमा ऋषि धमलासँग नेपाली बहसमा भने, ‘किटमार्फत् परीक्षण गर्न टोल टोलमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशको एक मात्र सरुरोग अस्पताल टेकुमा मात्रै अहिले यस्ता भाइरसको परिक्षण गर्ने संयन्त्रहरु रहेकाले यसलाई तत्कालै गाउँ गाउँमा पुर्याउन आवस्यक भएको बताए ।’
डा. राजभण्डारीले भने, ‘यो सेवालाई काठमाडौँमा मात्र राखेर हुदैन । देशभरी पुर्याउन पर्छ । अरु टेक्नोलोजी खोजेर भएपनि वडा वडामा गएर टेस्ट गराउनुपर्छ । अब टोल टोलमा गएर परिक्षण गरिएन भने थाम्न सकिदैन । किट मात्रै भएपनि परिक्षण गर्न सकिन्छ । किट भए अहिले एकलाख भन्दा बढी नेपालीलाई एक सातामै परिक्षण गर्न सकिन्छ । विरामीको चेकजाँच भनेको संकास्पद लाई मात्र परिक्षण गरिन्छ । देशबाहिर बाट पनि परिक्षणका लागि नमुना आइरहेका छन् । अहिले सामान्य रुघा खोकी लागेको धेरै विरामी आएकाले पनि समस्या भएको छ ।’